Baaqii dawladda oo loo dhaga nuglaadey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Baaqii dawladda oo loo dhaga nuglaadey
La daabacay tisdag 22 december 2015 kl 12.37
Suuqa shaqada iyo ajaaniibta
Gustav Fridolin (MP), Åsa Romson (MP) iyo Stefan Löfven (S). Sawirle: Janerik Henriksson / TT, Fredrik Sandberg/TT och Björn Larsson Rosvall/TT
Shirkado gaarsii-san 200 ayaa u dhega-nuglaadey fikirkii dawladda ee la xiriiray sidii tababar howleed loo siin lahaa ajaaniibta dalka ku dhaqan, middaasina oo ka dambeeysa siyaasadda dawladda ee ajaaniibta dalka ku cusub sidii ey bulshada ula qab-san lahaayeen khaasatan dhanka suuqa shaqada.
Omar Tobba, ahna 33 jir ka soo jeeda dalka Suuriya ee bartay culuunta injineeriyadda mashiinnada ayay u suurta-gashay inuu tababar shaqo ka bilaabo shirkadda Sweco:
- Nolosheeyda intaan noolaa waa tallabadii igu qiimaha badnayd iyo inaan waayo arag-nimo ka heli karo dhammaan culuunta taalla shirkadda VVS, waa sidaan qabo ama oran karo. Xaaladayduna xaqiiqdii aad bay u wanaag-san tahay. Dad wanaag-san oo naxriis badanna waan la shaqeeyaa oo iga caawiya sidii aan ula qab-san lahaa howlaha shirkadda.
Bartamihii bishii oktoobar ee sannadkan ayay dawladdu soo ban-dhigtay mashruuc loogu magac-darey "Sverige tillsammans – Sweden oo wada jirta" iyo sidii ey wada shaqeeyn u yeelan lahaayeen hayadaha dawliga ah iyo shirkadaha iyo sidii habka ugu wanaag-san ee soo-galootigu qeyb uga noqon lahaayeen bulshada.
Åsa Bergman, ahna agaasimaha guud ee shirkadda Sweco, ayaa sheegtay in tartanka howleed ee shaqaalaha injineeradu yahay mid aad u adag dalkan. Waana midda dhalisa in ajaaniibta ey aad ugu adag tahay in la qaabilo ama lagu soo dhoweeyo goobaha shaqada:
- Shaqaale wax ku soo kordhin kara shirkadda. Shirkadan Sweco-na waa mid goobo u diyaarin karta lagu soo dhoweeyo ajaaniibta. Waana aannu kala macaashno win win-situation.
Mattias Buravi, waa madax-goboleedka hayadda xafiiska shaqada ee koonfurta dalka. Sarkaalkan ayaa aamin-san 2500 oo goobo tababarro ey carrigaa ka jirto ama laga abuuri karo sida uu sheegay mar uu u warramayay laanta wararka idaacadda ee Ekot.